Dahalo any Befotaka : hanangana fanjakana vaovao ? (+vidéo) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Dahalo any Befotaka : hanangana fanjakana vaovao ? (+vidéo)
Misy zavatra hafahafa toa mitarika mankany amin'ny ady an-trano ny any atsimo. Io voalaza fa asan-dahalo any amin'ny faritra Anosy io dia toa zavatra voarindra tsara fa tsy mifandraika amin'ny anarana nomena azy. Ny fahasahian'ireo jiolahy mamerina ny fitaovam-piadiana azony tamin'ireo zandary babony na lavony fotsiny dia efa manambara fiantsiana sy filazana fa ampy fiadiana izy ireo ka tsy mila ny an'ny hafa ihany koa. Tsara ny mampahatsiahy fa tany amin'ny faritra Melaky no nanomboahan'ny tranga toy izao volana vitsy izay.
Ny fisian'ny toy ity tranga ity any amin'ny faritra hafa dia mampanahy ny fisian'ny fambolena fampiadiana samy Malagasy na famporisihana fananganana fanjakana "an'irotra". Tsy misy tsy mahalala hoe Firenena iza no manana tombontsoa amin'izany fikitranana anaty eto amintsika izany. Mazava arak'izany fa mamorina tranga hafa noho ny hafa eto amin'ny Firenena io lazaina fa asan-dahalo io.Hatreto aloha dia fantatra fa zandary sy miaramila latsaky ny dimapolo monja no nalefan'ny fitondrna any an-toerana ary tsy mbola nisy hetsika afaka natao satria na ny olona any amin'y manodidina aza matahotra an'ireto dahalo ireto mafy mihitsy.Mandry an-drirana'antsy lalandava arak'izany ny mponina any amin'ny Faritra Anosy sy Androy noho ity tranga iray ity.
Mety ho zava-doza ...
Raha ny vaovao fantatra farany dia toa RESEP na miaramila mpiambina ny filoham-pirenena tamin'ny andron'ny revolisiona sosialista ny mpitarika ireo mpikomy ireto ary isan'ny antony mahatonga azy ireo hanana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny "lance rocket" sy "bazouka" izany. Mandeha ihany koa ny resaka any an-toerana fa mitono-tena ho "armée du salut" na tafiky ny fanavotam-pirenena izy ireo. Raha ny tombatomban'ny mponina rahateo dia manodidina ny 900 isa any ho any ny mpikambana ao anatin'ity vondrona ity amin'izao fotoana.
Mila vahaolana maika ...
Ho an'ny Ankolafy RAVALOMANANA manokana dia mirehitra mena ny jiron'ny filaminam-bahoaka sy ny fitandroana ny fandriam-pahalemana. Nambaran'ny praministra lefitra Botozaza Perrot fa tokony hidina any Befotaka avokoa ny ankamaroan'ny foloalindahy satria mafana ary efa mangotraka mihitsy io raharaha io. "Fotoana tokony hampiasan'ireo manamboninahitra ny fahaizany izao" hoy izy "fa tsy mihanona lava amin'ny fibaikoana fandarohana vahoaka tsy manam-basy rehefa maneho hevitra izy ireo".